Antoko Alemàna Manohitra Ny Fifindràmonina, Mikendry Ireo Rosiana-Alemàna Mpifidy Aminà Dokambarotra Mankajala Vahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2017 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Français, English
Mpomba an'i Kremlin hatrany am-boalohany ihany koa ny AfD, izay loharanonà ahiahy lalandava momba ny mety fitsabahan'ny governemanta Rosiana amin'ireo fifidianana ao Alemaina. Miezaka mafy tokoa ny antoko amin'ny fikendrena ireo Alemàna-Rosiana, hany ka maro ireo fikambanana zanaka ampielezana no naneho am-pahibemaso ny fialàny lavitra ny kabariny tsara lahatra.
Fa vao haingana, nanao zavatra mahoraka na tsy vazavazaina aza, sy manafintohina, na amin'ireo mpanara-dia azy aza, ny antoko eo an-toerana AfD any Hambourg — fonenan'ireo vondrom-piarahamonina maro miteny Rosiana. Ao amin'ny pejy Facebook-ny, AfD Hambourg dia nandefa fampielezan-kevitra tamin'ny teny Rosiana, feno hadisoana tsipelina sy amin'ny fitsipipitenenana, fa tsy izany no tena ratsy indrindra mikasika io. Nampiasa fiteny mankahala vahiny io, izay efa tamin'ny andron'ny fanafihan'ny Mongola an’ireo fanjakana tamin'ny taonjato Faha-13 nialoha làlana an'ilay Rosia ankehitriny.
Voaresaka be tato ho ato ny vondrom-piarahamonina Rosiana-Alemàna ary matetika voasoratra ao amin'ny media — tsy an-tahotra, milaza ny mpikambana ao aminy — ho toy ny “andry fahadimin'i Poutine” na “soavaly Trojan” any Alemaina. Famoahana vao haingana tao amin'ny gazetiboky New York Times Magazine no maneho antsipirihany ilay “raharaha Liza” mahamenatra, izay nandefasan'ny sampana fahitalavitra Rosiana mikasika ny lazaina ho fanolanana tavovavy Rosiana-Alemàna nataon'ireo “mpifindra monina Arabo”, nahatonga fihetsiketsehana nasionaly nanohitra ny fifindràmonina. Nolazaina ho tsy nitombona moa taty aoriana ilay fiampangana, fa nanomboka hatramin'izay ny “raharaha Liza” dia lasa nampiasaina ho ohatra amin'ny fitsabahana mitratrevatreva ataon'i Rosia amin'ny raharahan'ireo firenena hafa, amin'ny alàlan'ny fampielezankevitra sy fambolena tahotra ao amin'ny media sosialy.